NextMping | Hutungamiriri Hwekuvandudza NeNe NextMapping ™ Cheryl Cran
Makambani akagadzirira emangwana anogadzirwa nevatungamiriri venguva yemberi vakagadzirira vane hunyanzvi hwekushandura shanduko uye hunyanzvi kumhanya wekuwedzera kwekuchinja.
Tinoshanda nevatengi vedu kurongedza hunyanzvi hwekuvandudza hutungamiri kuti huve hwakawanda, hunyanzvi uye nekubatsira sangano kuti rive rakagadzirira ramangwana.
Vasingagoni kuverenga nokunyora vezana rino ramakumi maviri nemasere havazove avo vasingakwanise kuverenga nokunyora, asi avo vasingakwanise kudzidza, kusadzidza nekudzidza. ”
Iyo ramangwana reiyo keynotes yebasa inopa kuoneswa, kutsvaga uye maitiro ekuti unobva sei ikozvino uye mune ramangwana.
Iwo makuru ehutungamiriri anopa mazano akasimba uye nzira dzekugadzira kuti dzive nekubatsira kuvaka hutungamiri hwamangwana hwakagadzirira hunodzora shanduko inoenda kune ramangwana rebasa.
Dhizaina ramangwana rako
Isu tinoshanda newe kuti tounze chiratidzo chako chakafemerwa cheramangwana rehupenyu. Kuburikidza neyedu NextMping ™ maitiro isu tinopa varume nevakadzi muhutungamiri neane zviwanikwa, kusimudzira uye matanho anoshanda ekukubatsira iwe kuti ugadzire remangwana rako remberi.
Inguva yekukwiridzira & kugadzirisazve nehunyanzvi hwekugadzirira hutungamiriri mune ramangwana
Kuti urarame uye ubudirire munguva dzino dzinokurumidza uye dzinokurumidza kuchinja, varume nevakadzi muhutungamiriri vanofanirwa kukudziridza hunyanzvi hwakakosha, hunhu, maturusi uye pfungwa.
Dzvanya mamiriro ezvinhu
Iyo nguva yemutsara wepfungwa yakapera - vatungamiriri vanofanirwa kumbundira vane pfungwa yekuda kuziva vachipesana nekugara vachitsvaga kutsigira zvavanoda kuti zvive zvechokwadi mukubudirira kwehutungamiriri.
Mepu yako yenguva yemberi zano zvikamu
Iwo akanakisa matanho anotanga na 'nei' uye anotanga nemangwana mhedzisiro mupfungwa. Vatungamiriri vakagadzirira remangwana vanoisa nheyo dzakakodzera dzekugadzira ramangwana ravo ravanoda. Mepu kunze matanho nekuronga mazuva gumi, mwedzi gumi kana makore gumi kunze.
Izvo sarudzo dzakanakisa dzinoitwa neazvino, data chairo uye nemamiriro akakodzera. Dzedu nzira dzekutsvagudza dzinosanganisira ongororo, zvemagariro vezvenhau, timu yevamangwana uye vesaenzi maitiro, pamwe nekutarisa mapoka evarume nevakadzi muhutungamiriri uye nezvimwe.
Unoda rubatsiro rwedu nekutungamira kwehutungamiriri hwekuvandudza?